CR7အပေါ် ဗန်ဒိုက် ရဲ့ ဟာသပြောဆိုမှုကို လီဗာပူး အသင်းကိုပါ ထိခိုက်ကာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန်ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ အမ - SPORTS MYANMAR
CR7အပေါ် ဗန်ဒိုက် ရဲ့ ဟာသပြောဆိုမှုကို လီဗာပူး အသင်းကိုပါ ထိခိုက်ကာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန်ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ အမ
ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ရဲ့ အမ ဖြစ်သူဟာ သူ့မောင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဟာသပြော ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး နောက်ခံလူ ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက် ကို ၎င်းရဲ့ အင်စတာဂမ် ကနေ တဆင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ညက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘလွန်းဒီအောဆုပေးပွဲမှာ သတင်းထောက် တစ်ဦးက ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ဒီညရဲ့ ဆုပေးပွဲကို လာမတက်တာကြောင့် ဂရုစိုက်စရာ ပြိုင်ဘက် တစ်ဦး လျော့သွားပြီလား ဆိုပြီး ဗန်ဒိုက်ကို မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူး နောက်ခံလူ က “ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို တကယ် ပြိုင်ဘက် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့လို့လား?” ဆိုပြီး ပြန်လည် ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်စတီယာနို ရဲ့ အမ ဖြစ်သူ ကာတီယာ က “ကျွန်မ ကတော့ လုံးဝကို စိတ်ပျက်စရာ ပြုမူ နေထိုင်ရတဲ့ လူတွေ ရှိနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ စိတ်ဓာတ်တွေ အရမ်း နိမ့်ကျ ကျပါတယ်။ ခရစ်စတီယာနို ဟာ အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ ဆုဖလား ၃ သုံး သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း သူဟာ ဒီနေ့မှာ ဘလွန်းဒီအောဆု ကို မရနိုင်ဘူး ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ နောက်ထပ် ဆွေးနွေး ရမယ့် စကားဖြစ်ပြီး ရှေ့အနာဂတ်မှာ ဘောလုံး နဲ့ပက်သက်တဲ့ အမှန်တရား ရောက်လာမလား ဆိုတာ ကြည့်သွား ရမှာပါ။
အခု ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက် ကို ပြောချင် တာကတော့ ခရစ်စတီယာနို ဟာ မင်းလုပ်ပြခဲ့တဲ့ ၊ မင်းရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာကို အကြိမ် ၁၀၀၀ လောက် လုပ်ပြ ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ရော်နယ်ဒို ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဆုဖလား ကို ၃ ကြိမ် ဆွတ်ခူး ထားခဲ့ပေမယ့်လည်း မင်းနဲ့ မင်းရဲ့ လီဗာပူး ကတော့ ဒါကို မကိုင်ဖူး​ သေးပါဘူး။ ခရစ်စတီယာနို ဟာ EPL မှာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ၊ အကောင်းဆုံး ဂိုးသွင်းသူ ဖြစ်ခဲ့ပါ သေးတယ်…ဗာဂျယ်။ စကား မစပ် ငါဟာ မင်းထက် ငယ်နေတဲ့ ပုံပဲနော်။ ဗာဂျယ်။ ပြီးတော့ ချစ်လှစွာသော ဗာဂျယ်…ခရစ်စတီယာနို ဟာ အခြားနေရာတွေမှာ သွားကစားပြီး ဒီကလပ်တွေရဲ့ သမိုင်းမှာ ကြီးကြယ်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗာဂျယ့်ကို ဘာထပ် ပြောစရာ ရှိသေးလဲ? ရော်နယ်ဒို ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ်မှာ မင်းကို အနိုင်ယူ ခဲ့တယ်လေ။ ဘလွန်းဒီအောဆုလား? ရော်နယ်ဒို ဟာ ငါးကြိမ် ဆွတ်ခူး ထားခဲ့ ပြီးပါပြီ။ ပြီးတော့ ရော်နယ်ဒို နဲ့ ပေါ်တူဂီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီက နယ်သာလန်ကို အနိုင်ယူ ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါဟာ လက်ခံရ ခက်ခဲ နေလို့လား..ဗာဂျယ်? ဒီအတွက် ဝမ်းနည်းပါတယ် ။ နောက်ထပ် ရှိသေးတယ်..ဗာဂျယ်! သူ့ကစားသမား ဘဝရဲ့ အောင်မြင်မှု အနည်းဆုံး ကာလမှာတောင်မှ ခရစ်စတီယာနို ဟာ မင်းထက် ဆုဖလားတွေ ပိုမို ရယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းမိုက်တယ်..မဟုတ်လား။
မင်းအနေနဲ့ တကယ့် ဆုဖလားတွေ အများကြီး ရမှပဲ ပြောကြတာပေါ့။ မင်းအနေနဲ့ အရေးပါတဲ့ ဆုဖလားတွေ အများကြီး ရယူ နိုင်ခဲ့မှသာ မင်းဟာ ခရစ်စတီယာနို ရဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ကောင်း ရောက်နိုင်မှာပါ။ မင်းအတွက်ကော ငါ့အတွက်ပါ..ခရစ်စတီယာနို ဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား အဖြစ် အမြဲ ရှိနေမှာပါ။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဗန်ဒိုက်ဟာ အဲဒီမတိုင်မီ ခရစ်စတီယာနို ရော်နယ်ဒို နဲ့ပက်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့ မှတ်ချက်ပေးမှုကို ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ Good Morning Britain presenter ဖြစ်သူ ပီယာမော်ဂန် နဲ့လည်း လူမှုကွန်ယက်မှာ အချင်းများ ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဗန်ဒိုက်ဟာ ဘလွန်းဒီအောဆု ကို စံချိန်တင် ၆ ကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တဲ့ လီယွန်နယ်မက်ဆီ ရဲ့နောက် voting results မှာ ဒုတိယနေရာ ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ တတိယနေရာ ရခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒို ကတော့ ပဲရစ်က ဘလွန်းဒီအောဆု ပေးပွဲကို မတက်ခဲ့ဘဲ မီလန်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ the Gran Gala del Calcio ဆုပေးပွဲ ကိုသာ တက်ရောက် ခဲ့ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒို အပေါ် ဗန်ဒိုက် ပေးခဲ့တဲ မှတ်ချက်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပီယာမော်ဂန် က “No..ခရစ်စတီယာနို ဟာ အဝေးကြီးမှာ ရှိနေတဲ့ ကြီးကြယ်တဲ့ ကစားသမားပါ။ မင်းဟာ သူ့နဲ့ တစ်တန်းတည်း မဟုတ်ပါဘူး။” လို့ တုန့်ပြန် ခဲ့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဗန်ဒိုက် က “hi ပီယာ…ခင်ဗျား အနေနဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ အပေါ် မှာ မဖွမီ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး တစ်ခုလုံးကို သေချာ ကြည့်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘက်က ဟာသ အနေနဲ့ ပြောခဲ့တယ် ဆိုတာကို နားလည် ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် ဒီကစားသမား နှစ်ဦးကို လေးစားပါတယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘလွန်းဒီအောဆု ကို မက်ဆီ ဆွတ်ခူး ပြီးတဲ့နောက် ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာလည်း ရော်နယ်ဒို ၊ မက်ဆီ တို့နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဗန်ဒိုက် က “အရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ကို ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပေမယ့်လည်း သဘာဝထက်ကို ပိုနေတဲ့ ကစားသမားတွေ ရှိနေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီလို ဂန္တဝင်တွေကို လေးစား ရမှာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီ​ဆုနဲ့ နီးစပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ထက် အနည်းငယ် ပိုကောင်းတဲ့ ကစားသမား ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လီဗာပူး နဲ့ ဟော်လန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူ မိပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း ဒီလို ထပ်လုပ်ပြနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို လူမျိုးတွေ ရှိနေသမျှတော့ ဒီဆုအတွက် ခက်ခဲ ပါလိမ့်မယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။